Global Voices teny Malagasy » Armenia:Mangataka Ny Hanatsaharana Ny Famonoana Ny Alika Mpirenireny Ireo Mafana Fo Mpiaro Biby · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Jolay 2011 14:06 GMT 1	 · Mpanoratra Liana Aghajanian Nandika nirinandrea
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Armenia, Fampandrosoana, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika
Fampiasana ireo fitaovam-pifaneraserana ara-tsosialy tsy mbola fahita no notontosan'ireo mafàna fo mpiaro biby any Kaokazy Atsimo andro vitsivitsy lasa izay, tamin'ny fangatahan'izy ireo ny hanatsaharana tsy misy hatak'andro ny famonoana miharo habibiana mianjady ny alika mpirenireny tamin'ny alalan'ny fanesehana fangatahana sy antso tao amin'ny pejy Facebook -n'i Karen Karapetyan ben'ny tanànan'i Yerevan
Namorona hetsika mitondra ny anarana hoe “Fitarainana ho an'ny Ben'ny tanàna momba ny fandripahana alika ” ireo mafàna fo ka 800 mahery ireo olona efa mandray anjara tamin'ny alalan'ny fandefasana hafatra tsy ankijanona tao amin'ny rindrin-dRamatoa Karapetyan miaraka amin'ny fanantenana fa hitondra fiovàna ity fomba fitolomana amin'ny alalan'ny cyber ity.
“Araka ny baikon'ny Ben'ny tanàna, efa nanomboka ny famonoana ireo alika teto an-tanàna,” hoy ilay hetsika.”Mbola tsy nisy famonoana goavana tahaka ity hatramin'izay. Namolavola tetika vaovao mihitsy izy ireo hisamborana ireo alika.”
Raha vao tamin'ny Desambra 2010 no teo amin'io toerana io izy, nietry sahady ny lazan'i Karapetyan eo amin'ireo mpitia biby, araka ny filazan'ny mpanao fanamarihana iray.
Ny fanamarihana sasany aza dia milaza hoe vonona ary mazoto mihitsy ireo mafàna fo hanampy ny tanàna amin'ny fandravonana ny olana mifanaraka amin'ny fomba maha olombelona.
Sary mampiseho ny famonoana sy fisamborana ireo alika mpirenireny nampakarina tao amin'ny rindrin'ny Ben'ny tanàna Karen Karapetyan.
Ny zavatra alefa ao amin'ny takelakan-dRamatoa Ben'ny tanàna dia tsy voatokana ho an'ny mponin'ny Armenia irery ihany.
Nohon'ny tsy fisian'ny rafi-ponenana na fanafody iarovana ny tanàna manontolo sy ny fanapahan-kevitra tsy miandàny, mitady sakafo sy fonenana ao amin'ny tanàna kelin'ny Yerevan ireo alika mpirenireny, izay mitombo taranaka. “Vonjeo ny Biby ,” fialofana tsy miankina iray noforonin'i Nune Mehrabyan, mpihira sady mafàna fo amin'ny fiarovana ny biby taorian'ny nanombohan'ilay famonoana ny taona 1990, mitàna alika efa ho 200 ary mivelona amin'ny fanomezana, izay tsy ampy….
Te-hiaina ao anaty firenena mandroso izahay, ka na dia ny tena marefo, malemy indrindra aza tsy tokony ho vonoina. Manao antso avo aminareo izahay hanohana ny fikambananay ho fanampiana ireo namantsika madinika ireo.
Nanangana sampan-draharaha iray hisahana ireo alika mpirenireny antsoina hoe “Unigraph X” ny fanjakana, hoy ny tranokalam-pifandraisany .
Hatramin'ny taona 2006 io sampan-draharaha io no voafidy ho mpandresy tamin'ireo fifaninanana nokarakarain'ny foibem-panjakana ary nametraka ny fanafody tsy mampiteraka ho an'ny alika mpirenireny tao amin'ny tanànan'i Yerevan.
Na dia izany aza anefa, aleon'ireo mafàna fo ireo io sampan-draharaha io mamono alika noho izany, toy ny anamarihan'ny  Traces of Life azy [am]:
Tsy tsikaritrareo ve fa tsy nihena akory ny isan'ny alika mpirenireny, nefa tsy hita izay nanjavonan'ny tahirim-bolam-panjakana natokana ho amin'io sampan-draharaha “Unigraph-X” io.
Tariby manokana mpitondra herinaratra no ampiasaina amin'ny faritra sasany, izany koa no ampiasain'ny Unigraph hihazàna alika.
Angamba miaina anaty ala mikitroka isika, ary izay no amonoantsika alika maro be, nefa mbola betsaka ihany ireo mandeha eny an-dàlana. Mbola tsy azontsika foana hoe mankaiza ireo vola ireo. Nefa avelantsika mandray antsika ho toy ny adala ry zareo, ary leo an'izany aho.
O rey olona e, mba te ho velona ny alika. Izany no tokony hataon-dry zareo amin'ny ankohonanareo sy ny zanakareo koa….
Manao fanangonan-tsonia ireo mafàna fo ho fandàvana ny famonoana ireo alika mpirenireny, nefa koa miatrika fanoherana ao amin'ny takelak'i Karapetyan miaraka aminà fanehoan-kevitra maneho henatra ara-kolotoraly mbola araikitra amin'ny alika mpirenireny ao Armenia.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/07/01/18956/
 pejy Facebook: http://www.facebook.com/#!/Karen.Karapetyan
 Fitarainana ho an'ny Ben'ny tanàna momba ny fandripahana alika : http://www.facebook.com/event.php?eid=241615879197430
 Vonjeo ny Biby : http://www.savetheanimals.am